Usizo lwabenza imisenenzi Aluminium Umkhiqizi emhlabeni Kusukela ngo-1999
Hongbao Aluminium has ingqikithi ukukhiqizwa nomthamo 250,000 imethrikhi ton aluminium mbuthano, ishidi, strip futhi ucwecwe. Hongbao uye ifakwe 1 + 4 hot Ngohlelo umugqa elendlalekile, 4 abandayo isigayo zokukhiqiza imigqa, akwazi ukugcina ukukhiqizwa 8 aluminium imigqa 4 ukukhiqizwa aluminium ucwecwe line.We baye yokuthengisa iqembu lochwepheshe, baye balufunda okungcono ubuchwepheshe kanye nokukhiqiza izinqubo, baye neminyaka nesipiliyoni namanye amazwe yokuthengisa, namakhasimende bakwazi ukuxhumana ngaphandle komzamo nangokunembile ukuqonda izidingo zangempela amakhasimende, amakhasimende nge isevisi uqobo kanye nemikhiqizo esiyingqayizivele.
Aluminium Circle Okungenalutho
amahora angu-24 ama-online services
ukulethwa Fast emva oda
isilawuli Strictly izinga by unjiniyela
ukwaneliseka Amakhasimende 'Umgomo wethu, futhi sethemba ngobuqotho ukusungula eside imigomo esitebeleni ubudlelwane wokubambisana namakhasimende ukuze ngokuhlanganyela ukuthuthukisa emakethe. Ukwakha brilliant kusasa ndawonye! Inkampani yethu ngokuqondene "ngamanani ezifanele, esebenza kahle isikhathi ukukhiqizwa futhi emva-sales service ezinhle" njengoba wumgomo wethu. Sithemba ukuba ubambisane amakhasimende amaningi ekuthuthukiseni mutual kanye nezinzuzo. Samukela abathengi ezingaba ukuxhumana nathi.